Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Luttaw – မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ
Category Archives: Luttaw – မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ
Posted on February 23, 2017 by freeburma
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကော်မတီတွေရဲ့ သက်တမ်းတိုးတာ၊ ကော်မတီဝင်တွေ အစားထိုး လဲလှယ်တာ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကို ကော်မတီတွေမှာ လေ့လာသူတွေအဖြစ် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ပြီး ကော်မတီအတော်များများက အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ ကော်မတီ ၁၄ ခုစလုံးရဲ့ သက်တမ်းကို နောက်ထပ် ၁ နှစ် တိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကော်မတီအသီးသီးမှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးစီကို လေ့လာသူအဖြစ် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ကော်မတီလုပ်ငန်းမှာ စိတ်မ၀င်စားသူတွေကို အစားထိုးလဲလှယ်တာ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကော်မတီတခုကို ၁၅ ယောက်နဲ့ဖွဲ့တာမှာ အရွှေ့အပြောင်းတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ တာဝန်က ထုတ်ပယ်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ လူအစားထိုးတယ်၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ကျတော့ နဂိုက တယောက်စီ ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ၁ ယောက်စီ ရှိတယ်။ အခု နှစ်ယောက်စီ လေ့လာသူအဖြစ် ဖြည့်တာပေါ့။ တချို့ကလည်း ကော်မတီမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းပြီးတော့ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွေ မတက်ရောက်နိုင်သူတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ အဲ့လို လူမျိုးကို အစားထိုး ပေးလိုက်တာပေါ့။”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ အစားထိုးလဲတာလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျင်းပနေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အမြဲတမ်းကော်မတီ ၄ ခု အပါအ၀င် ရေးရာကော်မတီပေါင်း ၁၄ ခု ရှိပါတယ်။
The post လွှတ်တော်ကော်မတီများ သက်တမ်းတိုး၊ အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးလဲလှယ် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2lrQxDs http://burmese.dvb.no
Posted on February 17, 2017 by freeburma
အစိုးရသစ်လက်ထက် သက်တမ်း တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ ဥပဒေကြမ်းတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးမှု အားနည်းသွားပြီး လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေမှာသာ ဆွေးနွေးမှု ပိုများလာတဲ့အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပြည်သူလူထုသိရှိမှု အားနည်း လာတယ်လို့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ရုံးမှာ ဒီနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ လွှတ်တော်ရေးရာ သုတေသန စာစဉ် ၁ မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ သုတေသန ဒါရိုက်တာ ဦးထင်ကျော်အေး က အခုလို ပြောပါတယ်။
"မီဒီယာတွေလည်း တက်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတွေ ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်ရှုထောင့် ဘယ်ရပ် တည်ချက်က ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေက သိခွင့်မရတော့တဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားတာ ကိုတွေ့တယ်၊ ကော်မတီကနေ လွှတ်တေ်ာကို ပြန်ပြီးအစီရင်ခံတဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုရင် ဘယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ဒီဥပဒေထဲမှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုး အဆင့်ထိပဲ ပါလာခဲ့တာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဘယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ထိဆွေးနွေးတယ် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေမှာ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုရှိတာ ပြည်သူတွေက သိခွင့်လျော့သွားတယ်ပေါ့နော်"
ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဆောင်ရွက်လာတာဟာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကြာချိန်ကို လျော့ချမယ်၊ လွှတ်တော်ကော်မတီတွေကို ပိုပြီးအားကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိနိုင်ပေမယ့် ပြည်သူတွေ သိပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်လည်း နည်းလမ်းရှာဖွေဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ က အကြံပြုထားပါတယ်။
လွှတ်တော် ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေဟာ ပြင်ပကို ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရ ဆိုတဲ့အချက်လည်း လွှတ်တော်ဥပဒေမှာပါရှိတဲ့အတွက် တချို့အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြီး အများပြည်သူသိရှိအောင် ပုံမှန်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေအတိုင်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မူ၊ သတင်းဖြန့်ဝေမှုတွ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဦးထင်ကျော်အေး က ပြော ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရင်အစိုးရလက်ထက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း ဥပဒေကြမ်းအများစုကို အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေက တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကော်မတီတွေက တင်သွင်းလာတာတွေ့ရတယ်လို့ သုတေသနစစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါ အစိုးရကို ဝေဖန်မှုတွေသိပ်မလုပ်ကြဖို့ လွှတ်တော်အကြီး အကဲတွေကိုယ်တိုင်က ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် အဆိုတွေ တော်တော်များမျာဟာ အတည်ပြုတဲ့ အဆင့် မရောက်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အဆင့်သာရှိတဲ့အတွက် လွှတ်တော်က အစိုးရကို ထိန်ကျောင်းနိုင်တဲ့ အင်အားလျော့သွားတယ်လို့ ဦးထင်ကျော်အေးက ပြောပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2l1l7E0 http://www.rfa.org
Posted on February 14, 2017 by freeburma
မေးခွန်းမေးမြန်း ဖြေကြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေ့၀ိုက်မနေဘဲ လိုရင်းတိုရှင်း ပြောဆိုကြရန် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသတိပေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ကိုယ်စားလှယ်များအား ဆက်စပ် မေးခွန်းမေးမြန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးဌာနများအနေဖြင့် သွယ်ဝိုက်မဖြေဆိုရန်လည်
via The Ladies http://ift.tt/2lKzWcg http://ift.tt/1t35IDK
Posted on February 6, 2017 by freeburma
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ တင် သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့် က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ကြံ့ခိုင်ဖံွ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းအေး က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြဌာန်းပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ရာ မှာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့် က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တုန်းက ဆွေးနွေးထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်း လေ့လာပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ မူဘောင်နဲ့အညီ ဖြစ်နိုင်သရွေ့ အဖိတ်အစင်မဖြစ်အောင် ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပါတယ်"
ပြီးခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြဌာန်းနိုင်ရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် သဘောတူညီမှုမရခဲ့ဘဲ အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို တာဝန်ကနေ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလို တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ မူလ မဲဆန္ဒရှင်တွေထဲက တစ်ရာခိုင်နှုန်းက လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေကြမ်းမှာ မဲဆန္ဒရှင် ၈ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံ လက်မှတ်နဲ့ တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2kk1dDB http://www.rfa.org
Posted on February 5, 2017 by freeburma
ဦးကိုနီနှင့် ဦးနေ၀င်းမိသားစုအတွက် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များက နှစ်ဆယ့်သုံးသိန်းငါးသောင်းကျပ်စီ ကူညီ
ဦးနေဝင်း၏သမီးအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စား စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘိုဘိုဦးက ပေးအပ်နေစဉ်
via7Days News http://ift.tt/2jRBFKy http://ift.tt/1Vus636
Posted on February 3, 2017 by freeburma
ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားအမတ်များ ပထမဆုံးအကြိမ် မေးခွန်းမေးမြန်း
ဖော်ဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ပညာရေးကိစ္စ ပထမဆုံးအကြိမ် မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကျင်းပခဲ့တာ ၁ နှစ် ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် တပ်မတော်သားအမတ်အချို့ ပထမဆုံးအကြိမ် မေးမြန်းခဲ့ကြတာပါ။
တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးအောင်ကျော်မိုးက လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းနဲ့ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးကျော်ထွန်းက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းကို ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ မေးခွန်းမေးမြန်းတာဟာ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး အရင်ကတော့ လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီအစည်းအစည်းအဝေးတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးတာတွေ ရှိပေမယ့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်း မေးခွန်းမေးမြန်းတာ၊ အဆိုတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးတာတွေ မရှိခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
The post ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားအမတ်များ ပထမဆုံးအကြိမ် မေးခွန်းမေးမြန်း appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2kzb5Kv http://burmese.dvb.no
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2l1CiTB http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on February 2, 2017 by freeburma
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံတာဟာ နိုင်ငံတော်ကို ခြိမ်းခြောက်တာဖြစ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီ ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတော်ကို ခြိမ်းခြောက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌဟောင်း ဦးခင်အောင်မြင့် က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ဦးခင်အောင်မြင့် က အဲဒီလို ပြောကြားတာဖြစ် ပါတယ်။
"အဲလိုလူတွေက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လို့ရှိရင် သူတို့ဟာ ထောင်လည်း မကြောက်တော့ဘူး၊ ထောင် ထဲမှာ ထမင်းမှန်မှန်စားရတယ် လုံလုံခြုံခြုံနေရသလိုဖြစ်နေတယ်၊ အပြင်မှာ သံယောဇဉ်လည်း ရှိပုံမရဘူး၊ ဒါမျိုးတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးသင့် မပေးသင့် တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စပေါ့နော်၊ နောင်အလားတူကိစ္စမျိုးတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုကိစ္စမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာမှာလား၊ ဦးကိုနီ ကို တယောက် တည်းနဲ့ ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံတော်ကို ခြိမ်းခြောက်တာဖြစ်တယ်"
အဲဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေ ထပ်မဖြစ်အောင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာမှာ စိစစ်ဖို့နဲ့ ဧည့်စာရင်းကိုလည်းလိုအပ်သလို စစ်ဆေးတာမျိုး ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့လည်း ဦးခင်အောင်မြင့် က အကြံပြုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိအချိန်မှာ လုံခြုံရေး အားနည်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဦးခင်အောင်မြင့် က ထောက်ပြပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ သေနတ်တွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ လိုနေပြီလို့လည်း ဦးခင်အောင်မြင့် က ပြောပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2kZmbWU http://www.rfa.org
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စတင်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေရဲ့ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ဒီကနေ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ ဇမ္ဗူသီရိ ထမင်းစားဆောင်မှာ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် စကားပြောပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် စကားပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2kfhE2s http://burmese.dvb.no
Posted on January 31, 2017 by freeburma
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2joirkE http://www.rfa.org
Posted on December 2, 2016 by freeburma
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ EITI ဦးဆောင်ကော်မတီကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလအတွင်း EITI လုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန်အဟုန် မပျက်စေရန် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ စာရင်းတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာ ရေးသားမည့် Independent Administrator (IA) ငှားရမ်းနိုင်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းတာဝန် ၀တ္တရား သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အစိုးရ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် အရပ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများကို ကျင်းပခဲ့ပြီး Myanmar EITI – Multi – Stakeholder Group (MEITI – MSG) သုံးပွင့်ဆိုင် ညွန့်ပေါင်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းအတည်ပြုရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် အမှန်တကယ် အကျိုးအမြတ်ခံစားသူကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း (Beneficial Ownership) လမ်းပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်၌ ကျင်းပရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးမျိုးထပ်(ခ) ဆလိုင်းမျိုးထိုက်၏ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ဆမီးမြို့နှင့် မတူပီမြို့နယ် လိုင်လင်းပီမြို့အကြား ဆမီး – လိုင်လင်းပီ ဆက်သွယ်သည့် ကားလမ်းအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်က ချင်းပြည်နယ် အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသများတွင် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းများချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ချင်းပြည်နယ်အတွက် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေကျပ် ၆၂၈၁ ဒသမ ၉၅၆ သန်း လျာထားခွင့်ပြုထားပါကြောင်း၊ ဆမီး – လိုင်လင်းပီ ဆက်သွယ်သည့် ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ထို့နောက် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ တင်ပြချက်အတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၏ ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်း အတည်ပြုဆုံးဖြတ်သည်။
(သူရဇော် – သတင်းစဉ်)
via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2gsS9uB http://ift.tt/1KnLGaX
Posted in Luttaw - မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Luttaw	| Leaveacomment |
Posted on November 18, 2016 by freeburma
ထို့ပြင် ကော့သောင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခင်ဇော်၏ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင်လုံကို ကြိုဆိုထောက်ခံ သောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမျိုးသားလုံခြုံ ရေးကောင်စီ၏ ထောက်ခံချက်ရယူပြီး အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသားများအား လွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးကနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေ များ ကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခဲ့သူများအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်များ စီရင်ချမှတ်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခံရသည့် အကျဉ်းသားများ အနက် နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၄၊ ပုဒ်မခွဲ(က)(ခ)အရ အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသားများအား ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်များ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါ ကြောင်း။
ထို့နောက် လှိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးက ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်း အရက်ချက်စက်ရုံ များမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ရေဆိုးများအား ပြည့်စုံသည့် သန့်စင်စနစ် တပ်ဆင်ပြီး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စွန့်ပစ်မှသာ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို တင်သွင်းရာ လွှတ်တော်က လက်ခံ ဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2g4mr7b http://ift.tt/1KnLGaX
ရပ်နားထားတဲ့ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ ပြန်လည်ကျင်းပမယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အသီးသီးက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်တွေထဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ၊ အမျိုးသားနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တတိယ အစည်းအဝေးများကို နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက် မနက်မှာ စတင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်မှာ ခေတရပ်နားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အရပ်ရပ် စတင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ကစလို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေပေါင်း ၃၉ခု ရှိတယ်လို့ လွှတ်တော်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
The post လွှတ်တော်အရပ်ရပ် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ပြန်စမည် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2e98O2m http://burmese.dvb.no
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2e9PAy3 http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Luttaw - မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Luttaw	| Leaveacomment |
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2e6MzxK http://www.rfa.org
Posted in Luttaw - မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw	| Leaveacomment |
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ဟုယူဆခြင်းကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်တော်မေ
via The Ladies http://ift.tt/2cILDgA http://ift.tt/1t35IDK